Wonke umntu uyaziqhelanisa nokuqaliswa kwesithuba. Kukho i-rocket edibeneyo, kwaye ekupheleni kwexesha elide lokubala, likhupha phezulu. Kodwa, nini na loo rocket ingena kwindawo? Umbuzo omhle ongenayo impendulo ecacileyo. Akukho mda othize ochaza apho indawo iqala khona. Akukho mgca emoyeni onomqondiso othi, "Isikhundla siLo!".
Umda phakathi koMhlaba kunye nendawo
Umgca phakathi kwesithuba kunye "engenawo indawo" ngokwenene imiselwe ngomoya wethu.
Phansi apha ephasini lomhlaba, linzima ngokwaneleyo ukuxhasa ubomi. Ukunyuka emoyeni, umoya ukhula kancane. Kukho umkhondo weegesi esiphefumula ngaphezu kweekhilomitha ezilikhulu ngaphezu kweplanethi yethu, kodwa ekugqibeleni, zincinci kakhulu kangangokuthi ahluke kwi-kufuphi-vacuum space. Amanye ama-satellites aqikelele ubunzima bomhlaba womhlaba ukuya kumawaka angama-800 ekhilomitha (malunga neekhilomitha ezili-500) kude. Zonke iipatellithi zihamba kakuhle ngaphezu kwemoya yethu kwaye zijongwa ngokusemthethweni "kwindawo." Ngenxa yokuba i-atmospheric yethu inqabile ngokuthe ngcembe kwaye akukho mda ocacileyo, iinqununu zafuneka zifikelele "umda" osemthethweni phakathi kwemoya kunye neendawo.
Namhlanje, inqobo evunyelweneyo-ncazelo apho indawo iqala khona malunga neekhilomitha eziyi-100 (62 miles). Kwakhona kuthiwa yi-von Kármán line. Nabani na ongeqa ngaphaya kwe-80 km (50 miles) ephakamileyo udlalwa ngokuba yi-astronaut, ngokutsho kwe-NASA.
Ukuhlola iItmospheric Layers
Ukubona ukuba kutheni kunzima ukuchaza apho indawo iqala khona, jonga indlela umoya wethu osebenza ngayo. Cinga nje ngeqebengwane elenziwe ngegesi. Liqhenqile ngaphaya komhlaba wethu kwaye lincinci phezulu. Siphila kwaye sisebenza kwinqanaba eliphantsi, kwaye abantu abaninzi bahlala kwimitha engaphantsi okanye kwimoya.
Kuphela xa sihamba ngomoya okanye sikhwele iintaba eziphakamileyo ukuba sifinyelele kwimimandla apho umoya uncinci. Iintaba ezide kakhulu ziphakama ukuya kuma-4200 ukuya kwi-9144 kumitha (14,000 ukuya kwii-30,000 iienyawo).
Uninzi lwabagibeli bahamba ngeenxa zonke malunga neekhilomitha ezili-10 (okanye i-6 miles). Ngona i-jets eziphambili zezempi azikhange zikhuphuke ngaphezu kweekhilomitha ezingama-30 (98,425 iinyawo). Iibhaluni zemozulu zingaphuma kwiikhilomitha ezingama-40 (malunga neekhilomitha ezingama-25) kwindawo ephakamileyo. Ama-meteors afana neekhilomitha ezili-12 ukuya phezulu. Iimbane ezikumantla okanye ezisemzantsi (ukubonakaliswa kwe-auroral) zi malunga neekhilomitha ezili-90. Isikhululo soMhlaba wonke sihamba phakathi kwama-330 no-410 amakhilomitha (205-255 iekhilomitha) ngaphaya komhlaba kwaye ngaphezu kwemoya. Kuhle ngaphezu komgca wokuhlula obonisa ukuqala kwendawo.
Izazi zeenkwenkwezi kunye neengcali zeplanethi zihlala zihlula "indawo esondeleyo-emhlabeni" kwindawo eyahlukeneyo. Kukho "geospace", eyona ndawo yendawo esondele kufuphi noMhlaba, kodwa ngokukodwa ngaphandle komgca wokuhlula. Emva koko, kukho indawo "ye-cislunar", leyo yindawo ekudlula ngaphaya kweNyanga kwaye iquka iMhlaba kunye neNyanga. Ngaphaya kweso sikhala sendawo, esajikeleza i-Sun kunye neeplanethi, ukuya kumda we-Cloud Oort .
Indawo elandelayo yindawo ye-interstellar (equka isikhala phakathi kweenkwenkwezi). Ngaphandle kwaloo ndawo yindawo yegalactic kunye nendawo ye-intergalactic, ejolise kwizikhala ngaphakathi kwendima kunye phakathi kweendluli, ngokulandelanayo. Kwiimeko ezininzi, isikhala phakathi kweenkwenkwezi kunye nemimandla emikhulu phakathi kweendlu zezintlu asinanto. Ezi ndawo zihlala ziqulethe i-molecules zamagesi kunye nothuli kwaye ngokufanelekileyo zenze i-vacuum.
Ngeenjongo zomthetho kunye nokugcinwa kwerekhodi, ezininzi iingcali zicinga ukuba indawo iya kuqala kwindawo eyi-100 km (62 miles), i-von Kármán. Uthiwa ngu-Theodore von Kármán, injini kunye ne-physicist esebenze kakhulu kwi-aeronautics kunye ne-astronautics. Wayengowokuqala ukucacisa ukuba umoya ophezulu kweli nqanaba unqabile kakhulu ukuxhasa indiza yeenqwelo-moya.
Kukho izizathu ezicacileyo ukuba kutheni ukwahlukana okunjalo.
Ibonisa indawo apho ama-rocket akwazi ukuhamba. Ngendlela ebonakalayo, iinjineli ezidiza i-spacecraft kufuneka ziqinisekise ukuba ziyakwazi ukusingatha iindawo ezinzima. Ukucacisa isikhala ngokwemibhobho yomhlaba, iqondo lokushisa, kunye noxinzelelo (okanye ukungabi nalutho kwiphulo) kubalulekile ekubeni izithuthi kunye nama-satellites kufuneka zakhiwe ukuze zinqande imimandla engqongileyo. Ngeenjongo zokufika ngokukhuselekileyo emhlabeni, abaqulunqi kunye nabaqhubi be-US shuttle fleet banqume ukuba "umda wendawo yangaphandle" kwi-shuttles yayingaphezulu kweekhilomitha eziyi-122 (76 miles). Kuloo nqanaba, i-shuttles ingaqala "ukuziva" ukudonsa kwimbulunga yomhlaba kwengubo yomhlaba, kwaye oko kwathintela indlela abaye bahamba ngayo ekuhlaleni kwabo. Le nto yayisentla ngaphezu komgca we-von Kármán, kodwa ngokwenene, kwakukho izizathu ezinobunjineli ezicacileyo zokuchaza i-shuttles, ezithwele ubomi babantu kwaye zinemfuneko ephezulu yokukhusela.
Izopolitiko kunye neNgcaciso yeNgaphandle
Isizathu sendawo esingaphandle siyinxalenye yezivumelwano ezininzi ezilawula ukusetyenziswa koxolo kwendawo kunye namalungu ayo. Ngokomzekelo, iTraat Space Outy (isayinwe ngamazwe angama-104 kwaye idluliselwa kuqala yiZizwe eziManyeneyo ngo-1967), igcina amazwe ekuthiwa yintsimi engaphandle kwindawo. Kuthetha ukuthini ukuba akukho lizwe elinokuthi libethe ibango kwindawo kwaye igcine abanye baphume kuyo.
Ngaloo ndlela, kubalulekile ukuchaza "indawo yangaphandle" yezizathu ze-geopolitiki ezingenanto inokuyenza ngokukhuseleko okanye ubunjineli. Izivumelwano ezinokumisela imida yendawo zilawula oorhulumente abanokukwenza okanye ngokumalunga namanye amabhunga kwindawo.
Ikwabonelela ngezikhokelo zokuphuhliswa kweenkoloni zabantu kunye neminye imisebenzi yophando kwiiplanethi, ngeenyanga kunye ne-asteroids.
Yandisa kwaye ihlelwe nguCarolyn Collins Petersen .
Iimagazini ze-Astronomy ne-Space Show You Cosmos
Ziyintoni ukuLuthwa kwezilwanyana?
I-Case ye-Nearly Naked Black Hole
IWedleyan College Admissions
I-World Record Bass yaseGeorgia